श्रावन १४, २०७८ ०९:२१ मा प्रकाशित
वैज्ञानिक रोबर्ट कार्लसनले सन् १९६२ मा अमेरिकामा एक किताब प्रकाशित गरिन् । जसको नाम मौन मृत (SILENT Spring) थियो । उनले यो किताबमा कसरी विभिन्न रसायनले मानव स्वास्थ्य र वातावरण्माा गम्भीर असर पर्छ देखाएकी थिइन् ।
यो किताबले अमेरिकामा सनसनी मच्चायो र अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपतिले डीडीटी(औषधि) प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए । नेपालमा भने डीडीटी औलो उल्मुलन गर्न तराईमा धेरै प्रयोग गरियो । त्यसले मानव स्वास्थ्यमा वा त्यहाँको वातावरणमा के असर पार्छ वा पार्‍यो भनेर कहिले पनि अनुसन्धान गरिएन । सन् २०००मा मात्र डि.डी. टी नेपालमा पैतिबन्धित भयो ।
केही साताअघि नेपलामा एक कार्यक्रम भाग लिन आएकी डा. बन्दना शिवासँग मेरो भेट भयो र उनले मलाई हाम्रो भोजनमा विष भन्ने किताब उपहार दिइन् । त्यो किताब पढ्दै थिएँ । नेपालमा विषादीको प्रयोग घटाउन सरकारले साताव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको समाचारतर्फ ध्यान गयो ।
मानव स्वास्थ्यलाई हानीग र्ने विषादीको प्रयोग घटाउँदै लैजान कार्यक्रम नेपाल सरकारले १५ वर्ष पहिले देखि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर विषादीको प्रयोग त झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ ।
२०७४ पुष २० गतेको समाचार अनुसार नेपालमा एक वर्षमा ५ लाख ७ हजार किलो विषादी प्रयोग हँुदो रहेछ । नेपालमा तरकारी, खाद्यान बाली तथा फलफूलमा जथाभावी तरिकाले
विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । एक किसानमहिलालाई तरकारीमा विषदी प्रयोग गर्न हुन्छ त ? भनेर एक पत्रकारले सोद्धा उनले भनेकी थिइन् ‘आफूले खानका लागि छुटाएको तरकारीमा चाँही विषादी हाल्दिन । बजारमा बेच्नका लागि रोपेको तरकारी चाँही हाल्छु ।’ बिचरी उनलाई यो थाहा थिएन कि उनले अरुका लागि प्रयोग विषादीले उनलाई कतिहानि पुर्‍याउँछ । उनलाई यो पनि थाहा रहनेछ कि विषदी माटोमा परेपछि उनको तरकारीमा पनि जान्छ । सरकारले गठन गरेको किसान पाठशालामा खर्चेको करोडौं रकमले ती महिललाई सानो जानकारी पनि दिन सकेन ।
डा. वन्दना शिवाले हाम्रो भोजनमा विष नामक किताबमा भारत र दक्षिाण एसियाका कृषकहरुले जथाभावी विषादी प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा परेको समस्या उजागर गरेकी छिन् ।
भारतमा विभिन्न ठाँउमा गरिएका अनुसन्धानले के देखायो भने गर्भमा रहेको भुण्रमासमेत यस्ता विषादीको प्रयोगले नराम्रो असर पार्दाेरहेछ । विषादीको प्रयोगले गर्दा अपांगता भएर जन्मिएका बच्चाको फोटो हेर्दा मन दुख्छ र प्रश्न उठिरहन्छ के नेपालमा पनि घटना भएका छन् ?
उनले यस किताबमा लेखेअनुसार शरीरका विभिन्न अगं प्रत्यङ्गमा हानीकारका विषदीले क्यान्सर उत्पन्न गराउन सक्छन् । ती किसानहरु जसले जथाभावी विषादी खेत बारीमा छर्छन् उनीहरुको स्वास्थ्यमा पनि कति नराम्रो असर पर्दोरहेछ भनेर उनले भारतको केरलामा काजु उत्पादन हुने ठाउँको एक दुखद उदाहरण दिएकी छिन् ।
वैज्ञानिक भएको नाताले डा. वन्दना शिवले कसरी विभिन्न विषादीले तत्कालीन र दुरगामी असर पार्न सक्छ भनेर राम्रोसँग विश्लेषण गरेकी छिन् । उनले युरोप र अमेरिकामा हानिकारक भनेर प्रयोग गर्न रोकिएका विषादी भारतमा चाँही प्रयोग भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् । यसले कसरी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेर भविष्यको पुस्तालाई समेत अस्वस्थ बनाउन सक्छ भनेर लेखेकी छिन् ।
खेतमा हालिएको विषादी बगेर नदी, खोला र तलाउमा जान्छन् । त्यो पानीमा रहेका जीव र त्यो पानी प्रयोग गर्ने समुदायलाई पनि कसरी असर पर्छ भनेर उनले पुस्तकमा उदाहरण दिएकी छिन् ।
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि विषादीहरु यसरी नै पानीमा फैलिएका छन् । त्यसले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा कति असर पारेका छन्, त्यसको लेखाजोखा भएको देखिँदैन ।
विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी खाँदा तत्कालै असर देखिँदैन । तर छिटो पाकोस भनेर विषादी मिसाएको आँप, खरवुजा, केरा आदि खाँदा चाँही वान्ता हुने, पातलो दिसा लाग्ने पेट दुख्ने खुटा बाउडिने, शरीर गल्ने आदि समस्या हुन सक्छन् ।
तर कतिजनालाई त फलफूलमा रहेको विषादीले यस्तो असर पुर्‍याएको हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । तर जेठ, असारमा पाक्ने आँपको स्वाद बैशाखमै चाख्न मन लाग्ने मानिसलाई चाँही व्यापारीले विषादी हालेरै बजारमा उपलब्ध गराइरहेका हुन्छन् र समस्या उत्पन्न हुन्छ ।विषदीको प्रयोगले गर्दा हुने दीर्घकालीन समस्या थाहा पाएपछि त जथाभावी विषादीको प्रोग रोक्नु पर्ने हो ।
तर प्राय सरकारहरु बढी मुनाफा कमाउने व्यपारीहरुको खेलौना बनेको हुन्छन् । विषादीको प्रयोग गरेर बढी फलाउने र बढी कमाउने इच्छा राख्ने व्यपारीलाई सरकारले रोक्न नसक्ने रहेछ भन्छिन् डा. वन्दना शिवा ।
तर त्यस्ता व्यपारीहरुले शायद यो विचार गर्दैनन् कि यसरी विषादी प्रयोग गर्दा वातावरणमा जान्छ । उनी र उनको परिवारका सदस्यलाई पनि यसले उत्तिकै हानी पुर्याइरहेको बारे उनीहरु व्यवास्ता गरिरहेका हुन्छन् ।
यस पुस्तकमा देखाइएको छ, कसरी विषादीले महिला र पुरुषमा बाँझोपन लगाउँछ ? गर्भपतन हुने अपांगता भएका बच्चा जन्मिन सक्छ । दृष्टिमा समस्या भएर आँखा नै देख्न नसक्ने मृगौलामा विभिन्न समस्या हुने त छँदैछ । केरलाको नदीमा विभिन्न ठाउँमा परीक्षण गरिएको माटोमा समेत विषादीको अवरोध भेटिए । अनि ती ठाउँका बच्चाहरुमा सुस्त मनस्थिति, जन्मिँदै अपांगता, ढिलो रुपमा शारीरिक वृद्धि हुने आदि समस्या समेत देखिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अध्ययन पछि इन्डोसुल्फान विषादीले मानव शारीरिभित्रको हर्माेनलाई असर गरेर भविष्यको पुस्तालाई समेत असर पार्ने र वातावारण समेत नष्ट गर्ने हुनाले यस्ता विषादीमा बन्देज लगाउनु पर्छ भनेर माग गरिएको छ ।
तर अपशोच भारत सरकारले वैज्ञानिक र चिकित्सकहरुको विचारलाई खासै महत्व दिएन र केरलाको अपांगता भएर जन्मिएका बच्चाहरुको कारण इन्डोइन्डो सुल्फान विषादीको हो भनेर स्वीकार गरेन । पछिल्ला ११ वर्ष अघिदेखि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया न्यूजिल्याण्ड, जापन जसता देशमा इन्डोसुल्फान प्रयोग गैरकानुनी गैर कानुनी घोषित गरिएको छ ।
तर भारत सरकाले अझै यस विषादीलाई प्रयोग गर्न छुट दिइरहेको छ । यसमा वैज्ञानिकहरु चिन्तित छन् कि यसले गर्दा भविष्य ठूला दुर्घटना निश्चित छ । यस पुस्तकमा दिइएका विभिन्न घटनाहरु पढ्दा मनमा अत्यास लाग्छ कसरी हामीहरु विषादी खान्छौँ । विषादीमा सास फेर्छौँ विषादी छालामा टाँस्छौं र अनेक रोगको शिकार बन्छौँ ।
विभिन्न विषादीहरुका कारण महिलाहरुको शरीरमा पाइने ओस्ट्रेजोनको मात्र बढ्न जान्छ । यसले गर्दा स्तनक्यान्सर हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । वैज्ञानिक डा. बन्दना शिवा चिकत्सिक डा. मिरा शिवा र डा. वैभव शिन्हाले धेरै नै अध्ययन र अनुसन्धान गरेर उक्त पुस्तक लेखेका छन् । यो पुस्तकले विषादीको प्रयोग निरुत्साहित गर्छ ।
विभिन्न विषादीले गर्दा मानव शरीरमा ओस्ट्रेजोनको नामक हर्माेनिको मात्र बढ्न गएको तथ्य यस किताबमा देखाइएको छ यो । यो हर्माेनले महिलाको शरीरिमा प्रजनन अंग सुचारु रुपमा परिचालन गर्छ ।
कोरोनाबाट मृत्यु भएका बाबुको यादले सताएपछि छोराले बनाए दुरुस्तै मूर्ति
कोरोना खोप नलगाएका शिक्षकलाई विद्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने
नाइजेरियाको एक राज्यमा हैजाबाट ३२९ जनाको मृत्यु
नवजात शिशुमा देखिने खतराका संकेतहरू
शरीरको अनावश्यक तौल घटाउन उपयोगी फल केरा
निम्न आय भएका मुलुकलाई अमेरिकाले ५० करोड डोज खोप दिने
२० वर्ष उमेर पुगेका महिलाले खानैपर्ने खानेकुरा